Tag: njiri mara | Martech Zone
Tag: njiri mara
JustControl.it: Nchịkọta data nchịkọta akpaaka na ọwa niile
Ahịa ahịa dijitalụ bụ mkpa maka ịmewanyewanye ahazi: isi mmalite data ọhụrụ, njikọta ọhụụ nke mmekọrịta, ọnụọgụ na-agbanwe oge ọ bụla, ọhụụ UA, wdg. Maka ọdịnihu nke ụlọ ọrụ anyị, ọ na-ekwe nkwa na ọ ga-akawanye njọ na granular. Ọ bụ ya mere ndị ọkachamara na-aga nke ọma na ndị na-achọsi ike iji nwee ike ịme ihe iji rụọ ọrụ iji dozie ọnọdụ dị mgbagwoju anya na foto dị mgbagwoju anya. Agbanyeghị, ọtụtụ ngwaọrụ dị ugbu a ka na-enye usoro 'otu-ụzọ-niile' nke ochie. N'ime usoro mbu a, ihe niile
Ekwenyere m na B2B Social Media Marketing Successga nke Ọma na-ekwubiga okwu ókè
Tọzdee, Machị 16, 2017 Tọzdee, Machị 23, 2017 Douglas Karr
Ka anyi bido mkparịta ụka a site n’ikwu na ihe akaebe m niile bụ akụkọ. Emebeghị m nyocha ọ bụla zuru ebe niile iji gosipụta ebum pụta ụwa m; M na-aga n'ihu na ọtụtụ mmadụ na-agba izu na m na ha anaghị eji usoro mgbasa ozi eme ihe iji rụpụta nsonaazụ. Ha anaghị ata ahụhụ ma ọlị; ụlọ ọrụ ha na-eme ọfụma. “Chere!”, Ị kwupụtara, “Ha nwere ike na-eme nke ọma karịa!” Nope. Otu n'ime ụlọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị 100% YoY na